यी हुन एक दिनमा ४७ हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्ने बैंकर » aarthikplus
कु्नै कर्मचारीको दैनिकरुपमा अधिकतम कति रकम आर्जन गर्ला ? अनुमान लगाउनुहोस त ?
एक हजार,दुई हजार,पाँच हजार ?
तपाईको अनुमानभन्दा धेरै माथि तलब भत्ता बुझ्छन् हाम्रा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु । कुनै सिइओले दैनिक ४७ हजारसम्म बुझ्छन् भने कोहीले दैनिक ५७ हजारभन्दा माथि बुझ्ने गरेको बैंकहरुले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन हेर्दा भेटिन्छ ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका भुवन दाहालको दैनिक आम्दानी आम्दानी ५७ हजारभन्दा बढी बुझ्ने गरेको बैंकले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा भेटिन्छ । यस्तै हालै मात्र एनएमबी बैंकले २४ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार त्यहाँका सिइओ सुनिल केसीले गत आर्थिक वर्षमा बैंकबाट १ करोड ६६ लाख ८८ हजार ८६९ रुपैयाँ तलब र भत्ता वापत बुझेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो भनेको मासिक १३ लाख ९० हजार ७ सय ३९ रुपैंया हो र दैनिकरुपमा हिसाब निकाल्दा ४६ हजार ३ सय ५७ हुन आउँछ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार,सिइओ केसीले गत आर्थिक वर्षमा तलब वापत ५९ लाख ४ हजार,५ लाख ९० हजार रुपैयाँ संचय कोष, ५२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ केसीले बैंकबाट भत्ता वापत बुझेका हुन् । एनएमबी बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई ३५ प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको छ । जसमा लगानीकर्तालाई २१ प्रतिशत बोनस सेयर तथा १४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने छ ।